समाचार स्वास्थ्य फिचर
टेकुका चिकित्सक जसले परिवार बिर्सेर कोरोना आशंकित मात्रै हेरिरहे सुनसान काठमाडौं, त्रसित टेकु क्षेत्र
दिनेश गौतम काठमाडौं, १२ चैत
वरिपरि मान्छेहरूले घेरेका थिए । अनि एक पुरूष फोनमा चर्कोचर्को स्वरले चिच्याउँदै थिए । सँगै छेउमा थिइन् एक महिला । ठूलै विपदमा परेझैँ ती पुरूषको आवाज गुञ्जिरहेको थियो । बुधबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुको प्राङ्गणमा ।
हामी टेकु पुग्दा दिउँसोको १ बजेको थियो ।
ती पुरूषको आवाज हाम्रो कानमा पनि ठोक्कियो । नजिकै गएर सोध्यौँ ।
‘बुबा के भएको हो ?’ बेस्सरी बोल्दै हुनुहुन्छ नि !
‘के हुनु नि बाबु ! ४ घण्टा भयो एउटा एम्बुलेन्स पनि पाइएन । न उपचार हुन्छ । न एम्बुलेन्स पाइन्छ ।’
उनी आक्रोशित हुन्छन् ।
‘श्रीमतीलाई रातभर खोकी लागेर ल्याएको । भक्तपुरदेखि काठमाडौं आउँदासमेत उपचार हुन सकेको छैन । यता र उता गर्दै ज्यान जाने भइसक्यो । के गर्नु उफ !’
उनी निराश देखिन्छन् ।
उनी रहेछन् भक्तपुर लोकन्थलीका हरेराम पराजुली । ६१ वर्षीया श्रीमती रूकमणिलाई रातभर खोकीले च्यापेको रहेछ । बिहानदेखिको भोक । रातभरको निद्रा । रूकमणिको आर्त कसले सुनिदिने ?
रूकमणिले ख्वाक्क खोक्दा वरिपरि रहेका मान्छेहरू पनि भाग्छन् ।
१ साताअघिदेखि नै रूकमणिलाई खोकी लागेको रहेछ । ठिमी हस्पिटलमा उपचार गरेर घर ल्याएका रहेछन् । उपचारपछि पनि रूकमणिको खोकीमा कमी आएन । झन् बेथाले च्याप्दै लग्यो ।
रूकमणि शिथिल देखिन्थिन् ।
श्रीमतीलाई निरन्तर खोकी लागेपछि हरेरामले बुधबार बिहान ७ बजे फेरि लोकन्थलीको समिट हस्पिटलमा पुर्‍याए ।
हरेरामले खोकी लागेर ल्याएको भन्न नपाउँदै अस्पतालका डाक्टरले 'ओहो ! कोरोना हुन सक्छ । यहाँ हुन्न, टेकु लगिहाल्नुस्' भनेर ढोकाबाटै फिर्ता पठाए ।
उपचारको आशामा समिट अस्पताल पुगेका पराजुली दम्पती डाक्टरको व्यवहार देखेर आश्चर्यमा परे । उपचार नै नगरी डाक्टरले कोरोना भाइरस भन्ने रूकमणिको धड्कन खोकीसँगै झन बढ्यो ।
हरेरामले तत्काल एम्बुलेन्स खोजेर श्रीमतीलाई टेकुमा ल्याए । टेकुमा उनको कोरोनाको परीक्षण गरियो । तर, उनलाई कोरोना नभएको पुष्टि टेकु अस्पातलले गर्‍यो ।
त्यसपछि पराजुली दम्पतीले लामो सास फेरे ।
कोरोना भाइरस विश्वभर नै फैलिएको बारे उनीहरू पनि जानकार रहेछन् । कतै श्रीमतीलाई कोरोना भएको त होइन भन्ने डर पनि हरेरामलाई लागेको रहेछ । कोरोना नभएको पुष्टि त भयो । तर, टेकुले फेरि वीर अस्पताल जान भन्यो । वीर अस्पालत त जाने । तर कसरी ? न एम्बुलेन्स आउँछ । न हिँड्ने तागत नै छ ।
रूकमणि छटपटाइरहेकी छिन्, अस्पतालकै प्राङ्गणमा ।
टेकु अस्पतालमा सरूवा रोग मात्र हेर्ने भएकाले उनलाई वीरमा जान भनेको हो । अस्पतालभित्र सरूवा रोगका बिरामीको आर्त उत्तिकै छ । अझ कोरोना संक्रमित पनि त्यही अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
एम्बुलेन्सकै प्रतीक्षामा घिमिरे दम्पतीलाई छोडेर हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीको कार्यकक्षामा गयौँ ।
उनको चेम्बरमा पुग्नेबित्तिकै थाहा भयो– कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमितको संख्या बढ्यो । फेरि एक जनामा कोरोना देखियो ।
ओहो ! यो खबरले डर पनि लाग्यो । त्यही अस्पालतको आइसाेलेसन कक्षमा कोरोना बिरामी पो छन् ।
निर्देशक डा. राजभण्डारीको मोबाइलमा घण्टी बजेको बज्यै छ । कोरोना भएको हो होइन भनेर मिडियाबाट आएको फोन उठाउन भ्याई नभ्याई छ उनलाई । मिडियाको फोन उठाउँदा उठाउँदा उनी आजित भएको जस्तो देखिन्थे । केही बेरपछि उनले हामीलाई समय दिए ।
‘ल भन्नुहोस् के गर्नुपर्‍यो ?,’ निर्देशक डा. राजभण्डारीले कुरा अगाडि बढाए ।
कोरोनाको महामारी एकातिर । सबैभन्दा बढी चुनौती पनि तपाईंहरूलाई नै छ । अनि आशा र भरोसा पनि तपाईंहरूकै... । प्रश्न पूरा नहुँदै निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘टेकुका डाक्टर र नर्स घर नगई बसेका छन् । म पनि घर गएको छैन । कोरोना बिरामी यही अस्पतालमा छन् । डाक्टर र नर्सलाई सरिहाल्यो भने के गर्ने ? परिवारलाई त सार्नु भएन नि !’
निर्देशक राजभण्डारीको जवाफले हामीलाई नै अवाक् बनायो ।
निर्देशक डा. राजभण्डारीले नै केही आफ्ना कुरा यसरी राखे:
सरूवा रोगका बिरामी आउने टेकुमै हो । दिनमा ४–५ सय बिारमी आउने गरेका थिए । अहिले कोरोना फोकस अस्पताल भएको छ । जनरल ओपीडी बन्द छ । कोरोना शंकास्पद भएमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ । ४० वटा क्वारेन्टाइन छन् ।
बिरामीको अवस्था हेरेर उपचार गरिरहेका छौँ । ८० प्रतिशत सामान्य बिरामी छन् भने २० प्रतिशत जटिल । त्यसमा कति कोरोनाको आशंका गरिएका बिरामी पनि छन् । रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
अहिलेसम्म ३ जनालाई कोरोना भएको पुष्टि भएको छ । रूघाखोकी लागेका बिरामीलाई प्राइभेट अस्पतालले लिन मानेका छैनन् । त्यस्ता बिरामी देशभरबाट यहीँ आएका छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या छ । धेरै त कोरोना फोबिया भएर आएका छन् । विदेशबाट आएका नेपाली र विदेशीबाट नै सरेको हो कोरोना ।
कोरोना फोबिया भएर आउनेलाई काउन्सिलिङ गरेर पठाउने गरेका छौँ । ख्वाक्क र हाछ्यूँ हुनेबित्तिकै कोरोना हुने होइन ।
सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, प्राइभेट अस्पतालका डाक्टरलाई समेत काेराेना फोबिया भएको छ । प्रोटेक्सनको आवश्यक सामग्री नभएर पनि होला । डाक्टरलाई नै काउन्सिलिङ आवश्यक परेको छ ।
ठूला अस्पतालले आफ्नै अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने र टेस्ट गर्न मात्र टेकुमा ल्याउने हो भने समस्या हुने थिएन । यस्तो परिस्थितिमा काम गर्नु सबैको दायित्त्व र कर्तव्य होइन ?
डाक्टर नर्सका लागि पीपीईको अभाव छ । अब १५ दिनका लागि पुग्ने छ । अरू ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएकाे छ ।
अघिल्लो वर्ष डेंगुको उपचार गर्दा ७ जना डाक्टर र नर्सलाई सर्‍यो । त्योभन्दा पनि खतरनाक हो कोरोना । त्यसैले पीपीईविना बिरामीको उपचार गर्न सम्भव छैन ।
निर्देशक राजभण्डारीले अन्त्यमा भने, 'खोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोना लाग्ने होइन । सचेत र सावधानी भने अपनाऔँ ।'
उनको कुरा सकिएपछि हामी आकस्मिक कक्षमा पुग्यौँ ।
अहिले कोरोना फोकस भएकाले अरू रोग लागेका बिरामी आकस्मिक कक्षमा भेटिएनन् । आकस्मिक कक्षको गेटमै थिए पीपीई लगाएका डाक्टर ।
ती डाक्टरले भने, ‘घर नगएको २० दिन भयो । बूढी हजुरआमा, सुत्केरी भाउजू हुनुहुन्छ । बिरामी आउने भनेको पहिले इमर्जेन्सीमा हो । हेर्ने हामीले हो । सुरूमै कोरोना थाहा हुने होइन । रिपोर्टलाई कुर्नै पर्‍यो । त्यो बेलासम्म हामीलाई नसर्ला भन्न सकिन्न । हेर्नुस् त जहाँ हामी उभिएका छौँ, यहीँबाट कोरोना बिरामी आउने हो । ’
डाक्टर नर्स कति असुरक्षित छन् भन्ने यहीबाट प्रस्ट हुन्छ । ती डाक्टरको कुराले मन नै झसङ्ग भयो । स्वयम् डाक्टर नै डर र त्रासमा छन् भन्ने प्रमाण पनि हो ।
ती डाक्टरले लगाएको पीपीई पनि प्रोपर रहेनछ । सक्कली पनि होइन । काम चलाउ रहेछ । अनि नडराउनु पनि कसरी ?
‘यो प्रोपर पीपीई होइन । राम्रो पीपीई त तलदेखि माथिसम्मको एउटै हुन्छ । धन्न आज बुट भने पाइयो । भाइजर छैन । क्याप छैन । ल भन्नुहोस् त कसरी काम गरिरहेका छौं हामीले ?,’ अर्का डाक्टरले गुनासो गरे ।
‘अरू बिरामीलाई प्राइभेट अस्पतालले उपचार गर्ने । हाछ्यूँ आउनेबित्तिकै टेकु पठाउने ?,’ अर्का डाक्टरले थपे, 'धादिङबाट एक सामान्य बिरामीलाई त्यहाँको अस्पतालले टेकु पठाएछ । ल हेर्नुहोस् त फोक्कटमा ती नानीले दुःख पाइन् कि पाइनन् ? कोरोना भएको आशंका गरेर पठाएको रहेछ । बल्लबल्ल कोरोना होइन भनेर पठायाैँ । तर, पनि उनको चित्त बुझेको थिएन ।’ प्राइभेट अस्पतालप्रति ती डाक्टरकाे आक्रोश थियाे ।
त्यसपछि हामी टेकुको आइसोलेसन कक्षमा गयौँ । जहाँ सुनसान थियो । भित्र जान निषेध थियो । कोरोना पुष्टि भएका बिरामी त्यहीँभित्रको क्वारेन्टाइनमा थिए ।
पछि हामी फेरि गेटमा पुग्यौँ । १ घण्टाअघि भेटेको पराजुली दम्पती अझै त्यहीँ एम्बुलेन्सको प्रतीक्षामा रहेछन् । अरू सवारी साधन चलेका छैनन् । एम्बुलेन्स कुर्नुको पनि विकल्प थिएन । ४ घण्टासम्म पनि एम्बुलेन्स नआएपछि हामीले बाइकमा राखेर ती दम्पतीलाई वीर अस्पलामा पुर्‍यायौँ । अनि ती दम्पतीले खुसी हुँदै हात हल्लाएर वीरको आकस्मिक कक्षामा छिरे ।
त्यसपछि हामी वीरका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीको कक्षमा पुग्यौँ । उनी पनि व्यस्त थिए । उनको चेम्बरबाहिर एक कर्मचारी भन्दै थिइन्, ‘जाबो सिलाएको मास्क पनि पाइन्न भने के काम गर्ने ? हाम्रोचाहिँ ज्यान होइन ?’
फेरि अर्की महिलाले थपिन्, ‘परबाटै भन, वर नआऊ भनेर छिछि र दुरदुर गर्ने ? डाक्टरचाहिँ हामीसँगै काम गर्न हुने । यीचाहिँ छिछि र दुर दुर गर्ने ? कोरोनाबाट जोगिने सामग्री नपाएकोमा उनी आक्रोशित देखिन्थिन् ।
निर्देशकको कोठाछेउमै राखिएको थियो स्यानिटाइजरको भाँडो । अर्का कार्मचारीले थपे, ‘कहाँ स्यानिटाइजर हुनु, भाडो मात्र स्यानिटाइजरको हो । स्यानिटाइजर सकिएर त्यही भाँडोमा कामचलाउ स्प्रिट हालेको ।’
निर्देशक व्यस्त भएपछि धेरै समय कुर्नु पर्ने भयो । त्यसपछि हामी सडकमा निस्क्यौं ।
५० लाख नागरिक बस्ने काठमाडौं । सुनसान सडक । घरबाट बाहिर ननिस्कन माइकिङ गर्दै प्रहरी । अत्यावश्यक सवारी साधनबाहेक अरू चलेका थिएनन् । चोकचोकमा प्रहरी । विनापास चलेकालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरीले कोरोनाबारे बच्ने उपाय पनि सिकाइरहेको दृश्य सडकमा देखिन्थ्यो । सधैँ अस्तव्यस्त हुने सडक शान्त थियो । तर कोरोना संक्रमित बढेसँगै मानिसको मन भने झन् अशान्त ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, ०७:३५:००